တရုတ် ပြည်တွင်းစစ်ပွဲ - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၉၄၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ဆန့်တန်တိုက်ပွဲအတွင်း ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မှ ချန်ကျိအား တိုက်ခိုက်နေပုံ
ပြည်မကြီးတွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ထူထောင်
တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရ ထိုင်ဝမ်သို့ ပြောင်းရွှေ့
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သို့ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက် ရေးထိုးခြင်းမရှိ
၁၉၄၉ နောက် -
တရုတ်ပြည်တွင်းစစ်ပွဲ (國共內戰) သည် ထိုစဉ်က တရုတ်နိုင်ငံရေး ပါတီနှစ်ခု ဖြစ်သည့် အာဏာရ ကွန်မင်တန်ပါတီနှင့် အတိုက်အခံ ကွန်မြူနစ်ပါတီတို့အကြား ဖြစ်ပွားသည့် စစ်ပွဲဖြစ်သည်။ ယင်းစစ်ပွဲသည် ၁၉၂၇ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် စတင်ခဲ့သည်။ ယင်းစစ်ပွဲသည်လည်း အနောက်တိုင်းမှ ထောက်ခံသည့် ကွန်မင်တန်နှင့် ဆိုဗီယက်တို့က အားပေးသည့် ကွန်မြူနစ်တို့အကြား ခံယူချက် သဘောတရား၊ အယူအဆနှင့် နိုင်ငံရေးမူဝါဒ ရည်မှန်းချက် ကွဲပြားလျက်ရှိကြောင်း ထင်ဟပ်ပြနေသည်။ ကွန်မြူနစ်၏ သမိုင်းတွင် ယင်းစစ်ပွဲကို (အရင်းရှင်စနစ်၊ မြေရှင်စနစ် လက်အောက်မှ) လွတ်မြောက်ရေး စစ်ပွဲ (解放戰爭) ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
တရုတ်ပြည်တွင်းစစ်ပွဲမှာ ဒုတိယ တရုတ် ဂျပန် စစ်ပွဲ (ဂျပန်တော်လှန်ရေးစစ်ပွဲ) ဖြစ်ပွားချိန်အထိ ကြိုးကြားကြိုးကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဂျပန်တော်လှန်ရေး စစ်ပွဲတွင် ကော်မင်တန်နှင့် ကွန်မြူနစ်တို့ ဒုတိယအကြိမ် လက်တွဲကာ ကျူးကျော်ရေးသမားများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ တရုတ်ပြည်တွင်း ဝရုန်းသုန်းကား အခြေအနေသည် ဂျပန်တို့အဖို့ တရုတ်ကို ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ကာ တရုတ်အရှေ့ပိုင်း ဒေသများအား သိမ်းပိုက်နိုင်ရန် အခွင့်ကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အပြီး ဂျပန်တို့စစ်ရှုံးခဲ့သည့်အလျောက် ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုများ အဆုံးသတ်သွားသည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် တရုတ်၌ စကေးပြည့် ပြည်တွင်းစစ်ပွဲ ထပ်မံဖြစ်ပွားပြန်သည်။
၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် ကော်မင်တန် အမျိုးသားတပ်များ ထိုင်ဝမ်သို့ တိမ်းရှောင်ခဲ့ပြီး ကွန်မြူနစ်တို့က တရုတ်ပြည်မကြီးကို ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ နှစ်ဖက်အကြား ကြီးမားသည့် တိုက်ပွဲများ ရပ်နားခဲ့သည်မှာ ယနေ့အထိ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း နှစ်ဖက်အကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သို့မဟုတ် ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်များ ရေးထိုးခဲ့ခြင်း မရှိသောကြောင့် တရုတ်ပြည်တွင်းစစ် တရားဝင် အဆုံးသတ်သွားပြီလားဆိုသည်ကို အငြင်းပွားမှုများ ရှိနေသေးသည်။ ယနေ့တွင် ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြား နှစ်ဖက်ကမ်းအကြား စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အပိုင်းမှ နီးနီးကပ်ကပ် ကူးလူးဆက်ဆံမှုများ တနေ့တခြား များပြားလာပြီ ဖြစ်သည်။
↑ Tsang၊ Steve။ Government and Politics။ p. 241။
↑ Tsang၊ Steve။ The Gold War's Odd Couple: The Unintended Partnership Between the Republic of China and the UK, 1950-1958။ p. 62။
↑ ၄.၀ ၄.၁ Hsiung, James C. Levine, Steven I.  (1992). M.E. Sharpe publishing. Sino-Japanese War, 1937-1945. ISBN 1-56324-246-X.
↑ Wars and casualties of the 20th and 21st Century
↑ Leslie C. Green။ The Contemporary Law of Armed Conflict။ p. 79။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တရုတ်_ပြည်တွင်းစစ်ပွဲ&oldid=690886" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။